I-Deltek ConceptShare: Ukubuyekezwa kwe-Creative, Proofing, and Approvals Online | Martech Zone
Njengoba izinkampani zifuna ukukhulisa umkhiqizo ngamaqembu amancane, zidinga amathuluzi angazisiza zikhulise ukusebenza kahle. Okokumaketha kanye namaqembu wokudala okusho ukuhlangabezana nezidingo zephrojekthi ngesikhathi, ukusebenzisana neklayenti noma osebenza nabo, ukuqedela ukuhlela, ukuthola imvume nokuletha iphrojekthi ngesikhathi esinqunyiwe.
Yilapho I-ConceptShare kaDeltek Isixazululo singasiza. Ithuluzi lenza amaqembu wokumaketha nawokudala ahambise okuqukethwe okuningi ngokushesha futhi ngezindleko eziphansi ngokuhlehlisa nokusheshisa inqubo yokubuyekeza nokwamukelwa.
Izici zeDeltek ConceptShare nezinzuzo
Gcina Ithimba Lakho Lokubuyekeza Lihambisana - wabelana ngokuphepha nomsebenzi namakhasimende nababuyekezi bangaphandle, yenza kalula ukubuyekezwa ngamapharamitha achazwe kahle nezikhathi zokugcina, futhi wazise ngokuzenzakalela iqembu lokubuyekeza lezinsuku zokugcina nezinguqulo ngesikhathi sangempela.
Thola Impendulo Ecacile, Ebonakalayo - Buyekeza imibhalo, izithombe, amavidiyo, amakhasi e-web, nokuningi, umaki bese ubeka amazwana ngqo kwi-asethi evela endaweni yokusebenzela yokuhlola, bese uhlanganyela futhi ucacise impendulo ukugwema umsebenzi ongadingekile.
Sakaza umjikelezo wokubuyekeza - Gcina ukuphathwa kwenguqulo eqinile ukuze uqinisekise ukuthi wonke umuntu ubuyekeza impahla esesikhathini kakhulu, uqinisekise ushintsho olwenziwe phansi kwe-pixel ngokuqhathanisa okuhlangene, futhi ubeke phambili, uhlabe umkhosi, futhi uhlunge impendulo ukuze abadali bazi kahle ukuthi yiziphi izibuyekezo ukwenza.
Ukulandelela nokusebenza kwenqubo yokuCwaningwa kwamabhuku - Ukubuyekezwa kokucwaningwa kwamabhuku ngobufakazi besikhathi obubhaliwe bezicelo zokubuyekezwa nokugunyazwa, yenza isifinyezo sempendulo ukuze kutholakale yonke impendulo kudokhumenti ongabelana ngayo, futhi kufaka nezithonjana zempahla ukuhlinzeka isiqinisekiso esibonakalayo sezinguquko eziceliwe.
Ukufakazelwa Kwama-inthanethi Kwezibuyekezo Zobuciko Zamaqembu Angaphakathi Kwendlu
Ama-ejensi angaphakathi angama-34% athi amaqembu abo okudala asebenzisa amahora ayi-7 noma ngaphezulu ngesonto emisebenzini efana nokuhlanganisa impendulo nokuthola ukugunyazwa.
Umbiko Wokuphathwa Kobuciko Bangaphakathi kwe-2018. InMotionNow & InSource.
Ngezici zempendulo yokubambisana yeDeltek ConceptShare, ungaqinisekisa ukuthi ithimba lakho lithola impendulo ecacile, engenzeka ngokushesha futhi kalula ukunciphisa izingqinamba nokuletha okuqukethwe ngesikhathi.
Imicu yamazwana nezimpendulo inika amandla amaqembu ukuthi abambisane ngomsebenzi oqhubekayo
Amafulegi nezifinyezo zempendulo zihlukanisa impendulo engenzeka evela kumazwana avamile ukuze Abadali bazi kahle ukuthi iziphi izibuyekezo okufanele bazenze
Izaziso nezikhumbuzi ziqinisekisa ukuthi iqembu lokubuyekeza lazi kahle ukuthi yini edinga ukuthi libuyekezwe futhi livunyelwe, nini, futhi nini izinguqulo ezintsha ziyatholakala.
Faka ukuqhutshwa kokuhlolwa kwe-inthanethi kuyo yonke inhlangano yakho ngezici zokuphepha ezisebangeni
Ukufakazelwa Kwama-inthanethi Nezibuyekezo Zokudala Zama-ejensi
Lapho i-ejensi yakho ikhiqiza okuqukethwe kwenqwaba yemikhankaso kuma-akhawunti amaningi amaklayenti, imijikelezo engapheli yokubuyekezwa kokudala kanye nokubuyekezwa kungadala ukonakala kulayini wakho ophansi. Yakhelwe ngqo amaqembu wokukhiqiza amatasatasa anjengelakho, iDeltek ConceptShare iletha inqubo yokuhlola ku-inthanethi ukukusiza ukusheshisa umjikelezo wokubuyekeza-ukunciphisa izindleko zokukhiqiza nokunikeza isikhathi esithe xaxa sokuvuselela izidingo zamakhasimende akho.
Thola umbono wendawo yonke yawo wonke umsebenzi oqhubekayo
Gcina isikhathi sokujaha impendulo ngokuhlela izikhumbuzi ukuze ugcine ababukezi besemsebenzini
Hlanganisa futhi uhlele amafayela nokubuyekezwa komlando wokucwaningwa okulula
Mema amaklayenti nababuyekezi bangaphandle ukuthi banikeze impendulo ngamafa - akukho ukungena ngemvume okudingekayo
Izici ezisebenziseka kalula nokusebenza okunembile kufaka kalula ukungena kokuhamba kokusebenza kwe-ejensi yakho kungakapheli imizuzu
UDeltek manje unikeza abasebenzisi ithuba lokusebenzisa iConceptShare mahhala ngo-Okthoba 2020:
Tags: lemiedeltekdeltek imiqondoukuvunyelwa kokudala oku-inthanethiukubuyekeza kokudala online